Gorfeenta Xeerka Wado Marista Gaadiidka Somaliland. – MoTRD
HomenewsNewsGorfeenta Xeerka Wado Marista Gaadiidka Somaliland.
Gorfeenta Xeerka Wado Marista Gaadiidka Somaliland.
Hargaysa (WGaadiidka) Kulanka lagu gorfaynaayey wax ka bedalka Xeerka Wadomarista Gaadiidka Xeer Lanbar 56/203, kulankaasi ayaa wax aka qayab galay saraakiil ka socotay Ciidanka Nabadgalyada wadooyinka, Masuuliyiiin ka kala socotay Hay’addaha kala duwan ee Dawlada, madax dhaqmeed aqoon yahan kuu xeel dheer shuruucda Dalka Gaadiidleyda kala duwan ee wadanka iyo Madax ka socotay D/Hoose ee Dalka JSL ugu horayn halkaasi wax aka hadlay kuxigeenka Garyaqaanka Guud, Garyaqaan Xuseen Jaamac Belal waxaanu ka waramaay ujeedada laga leeyahay wax ka badalka iyo kaabista Xeerka Wadomarista Soamliland:-“ ujeedada loo sameeyay marka hore in dib loo habeeyo xeerka, ama kaabis iyo wax ka bedal lagooguu samaya ahayd ta 1aad in la waafajiyo siyaasada Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka iyo in lagu kabo siyaasada guud ee Qaranka, lanbar laba daaraasada lagu sameeyay mudooyinkii ugu danbeeyay Xeerka Caqabadihii ka horyimi iyo ku dhaqan la’aantiisi iyo casharadii laga bartay, ta 3aad waafajinta xeerka wado marista halbeegyada caalamiga ah, iyo ta 4aad oo ah Magacii Wasaaradda.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Horuumarinta Jidadka Cumar C/laahi Aadan ayaa sharaxaad ka bixiyey sababta keentay in dib loo eego xeerka wado marista, “Xeerarku kolay Dunida way koraan, xeerarku shanti sanoba badanaa waxay u baahdaan in wax laga badalo, ama dib u eegis lagu sameeyo, kana runtii aad iyo aad ayuu ugu baahnaa in wax ka bedal lagu sameeyo”.
Ugu danbayantii Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumrnta Jidadka ayaa ku dheeraaday dadaalada ay Wasaaraddu Qaranka ugu jirto Horumarinta hawlaha ay bulshada masuulka uga tahay.